हात सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
आफ्नो हात को त सुरक्षा, जो यति ध्यान दिएर छाला र नङ को हेरविचार बालिका, पाठ्यक्रम, एकचोटि छक्क परे छैन: राम्रो हाउसकिपरको बाँकी हुँदा कसरी आफ्नो मनोरम औंलाहरु को सौन्दर्य संरक्षण गर्न? यो एक सुन्दर मैनीक्योर र चमक सफेद सेनेटरी दुवै गर्न असम्भव छ। हरेक केटी पूर्ण gels, पाउडर र अन्य रासायनिक घरेलू क्लीनर को एक किसिम ल्याउन के हानिकारक प्रभाव छाला सतह थाह छ। र कुनै कुरा घमण्ड कति सफाई लागि banal तरल मा प्रवेश जो आफ्नो उत्पादन, को निर्माताहरु गुणस्तर जादुई ", regenerating हेरचाह र मृदुकरण" हात chamomile निकाल्ने (marigold, पुदीना, कन्फ्लावर, खरानी फुट्ने काम, आदि), सबैलाई थाह: अझै पनि भाँडा धुन तपाईं पन्जा लगाएका गर्नुपर्छ। सामना गरौं।
पन्जा र Mittens
यो तपाईं दुवै राम्रो हाउसकिपरको, र, सुन्दर नरम र नाजुक हातले राम्ररी groomed महिला हुन सक्छ कि बाहिर जान्छ - यो गर्न, बस हात सुरक्षा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यहाँ हामी पन्जा र Mittens को सहायता गर्न आउनुहोस्।
तंग-उपयुक्त वा छाडा, बाल रंगाई वा शौचालय कचौरा, रबर, polyethylene, लेटेक्स वा कपडे सफाई को लागि: तिनीहरूले भिन्न छन्। त्यहाँ पनि छन् , हात लागि पन्जा-मास्क ग्लिसरीन र ककडी रस को संरचना मा भिगो र पानी उठ्नुभयो। तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ?
पहिलो तपाईं हात सुरक्षा खरिद गर्न जाँदैछन् लक्ष्य कस्तो बाहिर आंकडा गर्न आवश्यक छ। अतिथि को एक ठूलो संख्या प्राप्त गरेपछि तल्ला धुन र भाँडा - उच्च workload प्रदर्शन गर्ने महिला लागि उपयुक्त बाक्लो रबर पन्जा बाट लामो छाडा। यी पन्जा तिनीहरूले धेरै प्रयोगको लागि उपयुक्त हो कि सुविधाजनक छन्।
छोटो पन्जा विशेष उच्च प्रदूषण मा, tidying पाइपलाइन समयमा सजिला मा आउनुहोस्। बाक्लो रबर जो देखि उनि छन् आन्दोलनहरु hamper छैन र खतरनाक रसायन संग सम्पर्क रोक्न।
बगैंचामा र बगैचा
सामान्य र देखि हात सुरक्षा rubberized कपडा जब पृथ्वी काम सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ - देश वा बगैंचामा। तर तपाईं आफ्नो साइट छैन भने पनि, यी पन्जा तपाईं उपयोगी, उदाहरणका लागि, पट मा houseplants प्रत्यारोपण गर्न हुनेछ। पारंपरिक रबर वा लेटेक्स पन्जा उपयुक्त छैन: पत्थर सजिलै तिनीहरूलाई आंसू जमीन मा गिरावट।
तर लेटेक्स हात सुरक्षा कहाँ, उदाहरणका लागि, तपाईं एक मित्र एउटा सानो घर ब्यूटी पार्लर व्यवस्थित र बाल रंग प्रयोग गर्नुहोस् निर्णय संग हुनुहुन्छ अवस्थामा आफ्नो बेबदल सहायक हुनेछ। सबैलाई छाला मा नकारात्मक प्रभाव कपाल डाई मा निहित अमोनिया प्रदान के थाह छ। र तपाईं निश्चित आफ्नो हात, बाल डाई छैन चाहनुहुन्छ हुनेछ। निस्सन्देह, कुनै पनि आत्म-आदर निर्माता चित्रित प्लास्टिक पन्जा संग बक्स मा निवेश, तर यो लेटेक्स पन्जा किन्न राम्रो हुनेछ - तिनीहरूले reusable छन् र भविष्यमा तपाईं उपयोगी हुन सक्छ।
जीवाणु कुनै भन्न!
यी पन्जा राम्रो मासु को प्रक्रिया को लागि अनुकूल: चिकित्सकहरु मासु जस्तै trichinosis, salmonellosis, ब्रूसीलोसिस रूपमा विभिन्न ब्याकटेरिया, द्वारा दूषित हुन सक्छ कि चेतावनी। यी ब्याकटेरिया, एक सानो घाउ मार्फत आफ्नो रगत मा एक पटक, रोग, त्यसैले PPE हात पनि भान्सा आवश्यक छन् हुन सक्छ।
साबुन र बाम
पन्जा र अन्य प्रयोग पछि PPE हात, पाठ्यक्रम, तपाईं छाला सफा गर्न, पाम जो, पन्जा छन् पसिना सामाग्री संग लामो समयसम्म सम्पर्क मा रहेको हुनाले चाहन्छु। र यहाँ सही क्लेंसेर चयन गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि स्टोर एक कोमल क्रीम-जेल गर्न ठोस क्षार पट्टी देखि consistencies को एक किसिम मा साबुन को एक सम्पूर्ण दायरा प्रदान गर्नेछ। विकल्प - तपाईं को लागि।
ध्यान मात्र वास्तवमा भुक्तान पर्छ भनेर कच्चा मासु काम डिटर्जेंट पछि, एक जीवाणुरोधी साबुन चयन गर्नुपर्छ पछि -, मृदुकरण बाल रंग पछि मइस्चराइजिंग - पौष्टिक कुरा। र अन्त मा तपाईं लाग्न सक्छ आफ्नो मनपर्ने क्रीम वा बाम केही फाइदा - र आफ्नो हात को छाला सफा र चमकदार हुनेछ।
मोटो जलने क्रीम कसरी काम गर्दछ? सर्वोत्तम मूल्याङ्कन
Alginate मास्क: गुणहरू, आवेदन विधिहरू, प्रभावकारिता
एक स्यागी पेट कसरी हटाउने?
AN Ostrovsky "आंधी"। विशेषताहरु Kuligina
पेन्सन "इन्द्रेणी" (Anapa, Dzhemete): विवरण, समीक्षा
Andrei Kostitsyn: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
फोटोग्राफी को क्षेत्र मा ठूलो विशेषज्ञ, भिडियो फिलिम विवाह
भवन dryers: पद, विनिर्देशों, निर्देशन,
कि लाभ Epics? महाकाव्य को संकल्प
विषय: शीर्ष के हो? सबै भन्दा साधारण मोडेल
सरकारी कागजात - यो के हो? अवधारणा र प्रकार